टेकेन्द्र शाह, गायिका - तीन प्रश्न - साप्ताहिक
अहिलेका व्यस्त श्रव्यदृश्य सम्पादकमध्ये एक हुन्- टेकेन्द्र शाह । कुनै समय गायक बन्ने उद्देश्यले गीतिसंग्रह तयार पारेका टेकेन्द्र अन्तत: भिज्युअल एडिटर बन्न पुगे । पुतलीसडकस्थित सिल्फ इन्टरटेनमेन्ट उनी आबद्ध प्रोडक्सन कम्पनी हो, जसमा पोस्टप्रोडक्सनको जिम्मेवारी टेकेन्द्र स्वंयले निर्वाह गर्दै आएका छन् । टेकेन्द्रले हालसम्म २ हजारभन्दा बढी म्युजिक भिडियोको भिज्युअल एडिटिङ गरिसकेका छन् । सुदूरपश्चिमको अछाममा जन्मिएका यी २८ वर्षीय युवा गायक हुने चाहना पूरा नभए पनि चल्तीको सम्पादक बन्न सकेकोमा सन्तुष्ट छन् । मलाई पुगेन, माया पनि नाटक, मेरो दिल चोरी, आमा, मर्छु बरु छटपटीमा जस्ता लोकप्रिय गीतका म्युजिक भिडियो उनैले सम्पादन गरेका हुन् । ६२ सालदेखि म्युजिक इन्डस्ट्रीसँग आबद्ध टेकेन्द्रले प्रसन्न पौडेलद्वारा निर्देशित चलचित्र मेरो बेस्ट फ्रेन्डमा एडिटिङ तथा भीएफएक्सको काम गरेका थिए । अहिले पनि उनी २ वटा चलचित्रको पोस्टप्रोडक्सनको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । टेकेन्द्रले दर्जनौं डकुड्रामा तथा डकुमेन्ट्रीको एडिटिङको काम समेत गरिसकेका छन् । नेपालीमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका टेकेन्द्र पर्दा पछाडि रहेर काम गर्नुको मज्जा लिइरहेको बताउँछन् । टेकेन्द्रसँग साप्ताहिकको तीन प्रश्न :
यो क्षेत्रमा कसरी प्रवेश भयो ?
सुरुमा गायक बन्ने चाहना थियो, एल्बम पनि गरे, तर त्यो यात्रा त्यत्तिकै अड्कियो । पछि म घुम्न भनेर आफन्तहरू भएको मुम्बई पुगे । मुम्बईमा सुदुरपश्चिमका धेरै नेपाली प्राविधिकका रूपमा काम गर्नुहुन्छ । बलिउड उद्योगमा काम गरिरहेका आफन्तहरूकै सल्लाहमा मैले भिज्युअल एडिटिङमा करिअर बनाउने निधो गरे भने आधारभूत ज्ञान पनि त्यहीं लिएँ ।
मुम्बई हिरो बन्ने उद्देश्यले गएको त होइन ?
होइन, मेरा दाइहरू त्यहाँ भएकाले घुम्नलाई गएको हुँ, तर त्यहाँ पुगेपछि एडिटर बन्ने चाहना भयो । केहि ज्ञान पनि हासिल गरें । नेपालमा आएर भिडियोको पोस्ट प्रोडक्सनको काम गर्ने चौतारी भिजन कार्यालय खरिद गरें । मैले देउडा गीतको १६ वटा भिडियो निर्देशन गरे पनि एडिटिङमै जमेर काम गर्ने चाहना भयो । अहिले यही क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छु । टेक्निसियनका रूपमा काम गर्दा आम्दानीको दीर्घकालीन स्रोत पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो ।
कत्तिको स्थापित भैसकेजस्तो लाग्छ ?
निरन्तर काम गरिरहेको छु, मैले खोजेको लक्ष्य हासिल गर्न अझै बाँकी नै छ, तर अहिलेसम्म जति उपलब्धि हासिल गरे, त्यसमा गर्व महसुस गर्छु । म आफ्नोकामबाट सन्तुष्ट छु, काम पाइरहेकै छु, आम्दानी पनि सन्तोषजनक नै छ । गरेका कामहरूले प्रशंसा पनि पाएका छन् । जे होस्, स्थापित हुने बाटोमै छु ।